Sacad Wuxuu Yidhi Kani Maaha Heshiiskii … Zamzam Na Waakan Bay Tidhi By Abdi Mustafe |
Sacad Wuxuu Yidhi Kani Maaha Heshiiskii … Zamzam Na Waakan Bay Tidhi By Abdi Mustafe
Xataa haday golaha xukuumadu lacag ku marsato maxay ka yeeli reer Saaxil oo u diyaara inay diidaan haduu ajanebi Saaxil soo cago dhigo dekeda
Caqliga wasiirada Dekeda tathriibinayaa waakaa iyagoo golaha wakiilada jooga Sacad nana leyey kani maaha heshiiskii DP world lala galay Zamzam na ay tidhi kani waa heshiiskii oo dhan. Talow keebaa been sheegaya …. Hadana Zamzam marka ay hadlayso ee mithaalka rooga u soo qaadanayso waxay sheegtay in la kala reebay.
Way caday in aan wasiirada Somaliland caqligooda ku shaqaynayn ee ay ku shaqaynayaan caqliga Amina Weris iyo Morgan. Qofku markuu been sheegayo wuu xanaaqaa hadii wax sua’ala la waydiiyo sidaana waxa ku sifowday wasiirka maaliyada oo cadho jiq noqotay. Hadaba heshiiska dekeda Berbera maaha mid xalaala oo waataa xildhibaanada lagu baayacayo $15, 000 mid kiiba. Xataa haday golaha xukuumadu lacag
ku marsato maxay ka yeeli reer Saaxil oo u diyaara inay diidaan haduu ajanebi Saaxil soo cago dhigo dekeda. Hadaba Maxamoud Xaashi oo aad u guulwadaynaya yaa yidhaa dantaa luud loox yare ayaad tahay oo deked aan wareejin kartaan ma jirto e.